Xaraashka? Toddobaadkii ugu horreeyay ee aan u haajirayo MacBook Pro | Martech Zone
Xaraashka? Toddobaadkii ugu horreeyay ee aan u haajirayo MacBook Pro
Axad, Oktoobar 29, 2006 Douglas Karr
Waqtigaan la joogo, mar hore ayaa lagugu soo rogay xayeysiiska Mac iyo PC:
Runtu waxay tahay inaanan hubin inay musbaaranayaan waxa ay tahay dadka isticmaala Mac inay ku raaxaystaan. Shaki kuma jiro dhammaan iLife, iMovies, iTunes, iwm inay fiican yihiin in la isticmaalo. Sidoo kale, layaab malahan in dadka hal abuurka jecel inay adeegsadaan Mac. Qaar ka mid ah waxay noqon kartaa in dadka sida Adobe iyo barnaamijyada sida Quark ay ku bilowdeen Mac.
Cunsurka aan aaminsanahay in Apple ay ka maqan tahay xayeysiisyadan ayaa ah xarrago ku xirnaanta adeegsadaha. In kasta oo Windows-ku isbeddelay oo dhab ahaantii ku dayday astaamo badan oo Apple ka mid ah, haddana weli wali si dhab ah umay qaban sahlanaanta isticmaalka.
Waxaan doonayaa inaan halkaan ku muujiyo da'dayda, laakiin waxaan ku bilaabay warshaddan anigoo barnaamijyada ku saleynaya macangag ku saabsan barnaamijka "Programmable Logic Controllers" (PLCs), waxaan u dhaqaaqay DOS, isku darka PLC-yada ilaa DOS, waxaanna soo saaray, barnaamijyo isku dhafan oo la hirgeliyey Microsoft Windows, IBM OS2 Warp / Warp Server, iwm waligeed ma sahlaneyn, laakiin marwalba waxaan isku xujeeyaa aqrinta iyo tijaabinta si otomaatig ah oo aan ula qabsado si ka badan. Waxaan haystay khibrad badan, waxaadna dhihi kartaa waxaan ahay 'Microsoft Guy', anigoo u isticmaalay qalabkeyga koowaad shaqooyinkeyga oo dhan.
OSX (Nidaamka Howlgalka ee Mac), wuu ka dhib yaryahay, fududahay in la isticmaalo, fududahay in la maquuniyo, la habeeyo, la dhexgalo, iwm. barnaamijka. Ma aanan ogeyn inaan si fudud ugu jiidi karo galka Codsiyada. Miyaadan jeclayn inay sidan fudud ku gasho Windows? Sheesh.
Isdhaxgalka shaqada (waxaan nahay dukaan Microsoft), wax dhibaato ah kuma qabin. Wax dhibaato ah kuma qabno gelitaanka shabakadda, helitaanka wireless-ka, adeegsiga Xafiiska iyo dirista iyo wadaagista faylasha. Waxay ahayd wax aan xanuun lahayn. Waxaan hayaa isbarbardhigyo socda 'haddiiba ay dhacdo' waxaan u baahanahay in aan ordo XP… laakiin waxaan ka baxayaa Daaqad ku taal Mac (waa cabsi badan) Halkaas waxaan ku leeyahay Microsoft Access iyo Microsoft Visio.
Marka… ereygeyga ugu horeeya waa inuu noqdaa iElegance. Apple waxay qabataa shaqo fantastik ah oo muuqaal quruxsan oo fudud oo si qumman u socota. Markii aan ka beddelay PC-ga PC-kii hore, si daacadnimo ah ayaa loo qaatay waqti ka badan inta ay u beddelayso Mac. Waan la dhacay.
U cusbooneysii WordPress-ka illaa 2.05 adigoon qashqashaadin bartaada!
7-da Caado ee Codsiga Webka 2.0 ee guuleysta
Oktoobar 30, 2006 at 5:42 AM
Ku soo dhowow adduunka cajiibka ah ee Mac 🙂
Waxaan soo gaadhay markii ugu horaysay ee aan gaadho Mac bilowgii 80-meeyadii, markii aan arkay demo carrabka ku adkaynaya xaqiiqda ah in Macs ay saaxiibtinimo leeyihiin (sida ku jirta “Fadlan geli diskka” oo ka soo horjeedda “geli disk”) Markii aan sanad ku qaatay Maraykanka 1986, shoolku wuxuu lahaa Macs oo keliya. Waxay ahaayeen kuwo aad u fudud shabakad, iyo waxa soo jiidasho leh in lagu sameeyo sawirada (maanta, mid ayaa ugu yeeri doona "sawirada"). Muddo sanado ah waxaan lashaqeynayay kombiyuutarada, badanaa sababtuna waxay ahayd arday ahaan mid awoodi kari waayey Mac waqtigaas. Haddana mar labaad waxaan haystay Mac qurux badan (5200), oo ahaa mid ka horreeyay, in kasta oo aan loo baahnayn, ee iMac. Haddana mar labaad, markii uu Windows XP soo baxay, waxaa igu kalifay inaan iibsado Laptop Sony ah. Kaliya maahan taageerada tiknoolajiyada nuugista, waqtigaas waxaan bilaabay inaan lacag ku sameeyo fiidiyowga, iyo inaan dib u kiciyo kombuyuutarkaaga saacad kasta oo uu macmiilku ku ag fadhiyo, ma ahayn khibrad wanaagsan. Markaa waxaan ku boodnay bandwaggon-ka 'Final Cut', horeyna wuxuu u haystay 1.25 nooca. Kama qoomamayn hal mar. Maanta waxaan joognaa 2 xafiiska, oo waxaan haynaa 5 Macs; wax walba oo laga helo yar yar oo ah Mac mini, oo ah gabal gaboobay oo G4 ah (ma qiyaasi kartaa PC 7 sano jir ah oo wali u muuqda mid wanaagsan, walina la shaqeyn karo?) ilaa G5 oo leh 4 processor.
Dulucda sheekada: Macs-ka ayaa laga yaabaa inuu ku kaco qarash badan wajiga hore, laakiin waxay wax badan ku keydsadaan kharashaadka waxsoosaarka, waxay ku faraxsan yihiin inay la shaqeeyaan, kana badbaadaan fayrasyada Kaliya way shaqeeyaan.